ECOWAS oo sheegay inay xal nabadeed ku dhexdhexaadin doonaan k... | Universal Somali TV
ECOWAS oo sheegay inay xal nabadeed ku dhexdhexaadin doonaan khilaafka siyaasadeed ee Gambia
January 09 2017 15:15:36
Urur goboleedka wadamada galbeedka Afrika ayaa sheegay in ay ku xaliyaan dhibaatada ka jirta Gambia dhexdhexaadin nabadeed iyagoo ka noqday go'aanki ay hore usoo jeediyeen ee ahaa faragelin militiri.
Gudoomiyaha urur gobaleedka ahna , Madaxweynaha Liberia Ellen Johnson Sirleaf, ayaa saxaafada u sheegtay caasimada Ghana ee Accra in ECOWAS ay doonayaan in ay dhexdhexaadin wax ku dhameeyaan haatan islamarkaana ay jiri doonin wax ciidan ah oo la geeynayo Gambia.
"Waxaa naga go'an dhexdhexaadinta si nabad ah iyo kala guurka awooda Gambia oo si nabad ah u dhacda . Waxaan sii wadi doonaa arintaasi hadda, "ayay tiri Sirleaf ka dib markii ay kulan la qaadatay madaxda gobolka ka dib caleema saarkii madaxweynaha cusub ee Ghana.
Waxay sidoo kale sheegtay in Urur goboleedka ay la soconayaan dhacdooyinka dalkaasi iyadoo Maxkamadda Sare Gambia ay dhagaysan doonto kiiska bisha January 10 ay u gudbiyeen xisbiga Jammeh si ay u joojiso natiijada doorashada islamarkaana doorashooyin cusub la qabto.
Sanadkii la soo dhaafay, Madaxweynaha Guddiga wadamada ECOWAS Marcel de Souza ayaa ka digay in faragelin milatari loo isticmaali karo haddii dadaalka loogu jiro dhexdhexaadinta oo Madaxweynaha Nigeria Muhammadu Buhari iyo Madaxweynehi hore ee Ghana John Dramani Mahama ay horkacayaan, ay ku guuldareystaan inay ka dhaadhiciyaan Jammeh in uu xilka wareejiyo.
Jammeh ayaa dhanka kale ku tilmaamay ECOWAS 'faragalintooda xaalad dagaal iyo sidoo kale inay meel uga dhaceen dastuurka Gambia kaas oo leh tilmaamaha cad oo ku saabsan sida ay u xalin karaan dhibka ka dhex jira gudaha dalka.
Senegal ayaa sidoo kale sheegay in faragelin milatari ay tahay xalka ugu danbeeya ee dhibaatada iyagoo rajeynaya Jammeh inuu aqbali doono in awooda uu wareejiyo si nabad ah. ECOWAS ayaa maanta ku qabanaya shir magaalada Abuja si ay u gaaraan go'aan kama dambays ah.
Kan-xigaBurundi oo xirtay lix qof oo lala xir...
Kan-horeDr. Rodney Shakespeare: UK, US waxay...
33,284,195 unique visits